Diyaaradda Ethiopian Airlines oo maanta ka degtay Hargeysa kadib mudo ay hawada ku xayirneyd |
Diyaaradda Ethiopian Airlines oo maanta ka degtay Hargeysa kadib mudo ay hawada ku xayirneyd
Hargeysa-KNNMagaalada Hargeysa ee xarunta xukuumadda Somaliland waxaa maanta ka degtay diyaaradda Ethiopian Airlines, kadib markii mudo laba maalmood ah oo ka bilaabaneysa maanta dalka laga qaaday xayiraadii ka saareyneyd duullimaadyada caalamiga ah.
Duulimaadka ay maanta Ethiopian Airlines ku tagtay magaalada Hargeysa ayaa imaanaya iyadoo maanta ay ku beegneyd maalinkii seddaxaad ee uu dhaqan gelayey go’aankii ay dowladdu ku hakisay dullimadyadii caalamka uga imaanayey ugana baxayey dalka.
Diyaaradan ayaa waxaa la sheegay in mudo ay dul heehaabeysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, kadib markii in ay degto ay u ogolaan weysay hey’adda duulista hawada Soomaaliya, taas oo saacado kadib u degtay ogolaanshaha wasaaradda dulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya.
Duulimaadka diyaaradan ku sigatay in lagu celiyo dalkii ay kasoo duushay ee Itoobiya, ayaa ku soo aadaya maalmo un kadib markii diyaaradda Fly Dubai oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta laga celiyey hawada magaalada Hargeysa, kadib markii hey’adda duulista hawada Soomaaliya ay u diiday in ay ka degto halkaas.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saartay ku fasaxday duulimaadyadii caalamiga ahaa dee dalka, mudo laba maalmood ah.
Wasaaradda ayaa qoraalkaas kasoo baxay ku sheegtay in go’aankaas uu ka dhashay cabasho ka timid mawaadiniin badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ku xayiran garoomada caalamka, iyadoo markii ay dhamaato labadaas maalmood ay dullimaadyadu hakad gelayaan mudadii 15-ka cisho aheyd.